थाहा खबर: 'नत्र दलाल पुँजीवादले कम्युनिष्ट पार्टीलाई निलिदिनेछ'
'नत्र दलाल पुँजीवादले कम्युनिष्ट पार्टीलाई निलिदिनेछ'
क्रान्तिकारी हुनु भन्दा क्रान्तिकारी भइरहन धेरै गाह्रो
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चार दिनदेखि धुम्बाराहीमा जारी छ। बैठकमा स्थायी समिति सदस्य र सल्लाहकार कमिटीका सदस्यहरुले बोल्ने क्रम जारी छ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले बोलिरहेका छन्। एकजना स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले बैठकमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्दै क्रान्ति ओरालोतर्फ लाग्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन्।
बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवका प्रतिवेदनमाथि लिखित टिप्पणी गर्दै कृषिमन्त्रीसमेत रहेका भुसालले हरेक क्रान्तिको वास्तविक अनुसार क्रान्तिपछि मात्रै देखिने बताएका छन्।
'हरेक क्रान्तिको वास्तविक अनुहार क्रान्तिपछि देखिन्छ। क्रान्तिका उपलब्धिबाट बढी उत्साहित क्रान्तिकारीहरुले भविष्यका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्दा र झन् ठूला कार्यभार नदेख्दा क्रान्तिहरु ओरालो लाग्न थाल्छन्', उनले भनेका छन्, 'अर्थात् क्रान्ति गर्नु महत्वपूर्ण छ तर क्रान्तिलाई जोगाउनु अझ महत्वपूर्ण छ। किनकि क्रान्तिकारी हुनु भन्दा क्रान्तिकारी भइरहनु धेरै गाह्रो हुन्छ।'
नेता भुसालले नेपाल राष्ट्रिय पुँजीको बर्चस्व भएको समाज नभएको बताउँदै दलाल पुँजीवादको बर्चस्व रहेको स्मरण गराए। 'नेपाली समाज पुँजीवादी हो तर यो उत्पादक/राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको समाज होइन। बरु यो अनुत्पादक र दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको पुँजीवाद हो', उनले भने, 'राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवादको आधार तयार हुँदैन। तर राष्ट्रिय पुँजीको विकासले मात्रै समाजवादको ग्यारेन्टी गर्दैन। त्यसैले हाम्रा अगाडि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र अर्कोतर्फ समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यभार छ।'
उनले उत्पादनमा जोड दिए मात्रै क्रान्तिले पुँजीवादलाई जित्न सक्ने जिकिर गरे। 'हरेक उत्पादन पद्धतिले आफुलाई निरन्तर पुन:रुत्पादन गरिरहन्छ। दलाल पुँजीवादले पनि आफु अनुकुलका पार्टी, नेता, मन्त्री, सांसद, बौद्धिक, पत्रकार, कर्मचारी, सामाजिक अभियानकर्ता पनि जन्माइरहन्छ', उनले अगाडि भनेका छन्, 'आजको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि राष्ट्रिय पुँजी र समाजवादको राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको पुनरुत्पादन गर्नुपर्छ, र अझ बढी मात्रामा उत्पादन गरेर मात्रै क्रान्तिले जित्छ। नत्र दलाल पुँजीवादले कम्युनिष्ट पार्टी स्वयंलाई निलिदिनेछ।'
नेता भुसालले क्रान्तिको प्रक्रियालाई अघि बढाउने हो भने अब पार्टीका हरेक सदस्यको योग्यता तोक्ने बेला आइसकेको बताए। 'आज हामीले क्रान्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने पार्टीका हरेक सदस्यको आधारभूत योग्यता तोक्नु पर्ने भएको छ', उनले अगाडि भनेका छन्, 'पार्टीका विचारप्रति सचेत हुनाका साथै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीका ‘हरेक सदस्य नकमाएको सम्पत्तिमा बाँच्दैनन वा आफ्नै कमाइमा बाँच्छन्, राज्यले तोकेको कर तिर्छन् र नागरिकले तिरेको राजस्व राज्यले दुरुपयोग नगरोस् भन्‍ने कुरामा हरबखत सचेत रहन्छन्’ जस्ता प्रावधान विधानमै उल्लेख गर्नु पर्छ।'
पार्टीको पुन:र्निर्माणबारे नेता भुसालले स्थायी कमिटी बैठकमा राखेको प्रस्तावको पूर्ण पाठ :
क्रान्तिसम्बन्धी हाम्रा सिद्धान्त र मान्यताहरु राजतन्त्र विरुद्ध जनवादी क्रान्तिका लागि विकसित र अभ्यास गरिएका हुन्। त्यो क्रान्ति नै सम्पन्न भैसकेपछि र नयाँ कार्यभार अगाडि आइसकेपछि हामीले जुन नयाँ उचाईंबाट विचार र सङ्गठनलाई विकसित गर्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन। त्यसले गर्दा सबै क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्याहरु देखा पर्दैछन्।
एउटा राजनीतिक पार्टीले सामना गर्नु पर्ने अनगिन्ती समस्या हुन्छन् तर तिनको अध्ययन र समाधान भने विचार र सङ्गठनको एउटा निश्चित ढाँचाबाट गर्छ। अहिले समस्या नयाँ नयाँ रुपमा आएका छन् तिनको समाधान पुरानै ढाँचाबाट समाधान खोज्दा हामी अझ समस्याग्रस्त हुँदै जानेछौँ। त्यसर्थ, हामीले आफुलाई नयाँ ढाँचामा उभ्याउन हिम्मत गर्नै पर्छ।
आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जुन ऐतिहासिक जहाँ उभिएको छ त्यो असाधारण सम्भावना र चुनौतीको बिन्दु हो। हामीले जे गर्दै छौँ त्यो विश्वकै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मौलिक छ। जसरी हाम्रा उपलब्धीहरु हाम्रो आफ्नो बाटो र अनुभवमा आधारित छन्, त्यसैगरी हाम्रा चुनौति पनि अरुका भन्दा फरक छन्। राजनीतिक पार्टीहरु सत्तामा पुगेपछि जनतासँग आफैले गरेका बाचाहरुको कठिनतम परिक्षामा सामेल हुन्छन्। आज हामी त्यही परिक्षामा छौँ। गएका दुई वर्ष हामी अलमलिएको जस्तो देखिएका छौँ। बाँकी समयको हरेक क्षण हाम्रा लागि असाधारण महत्वका छन्।
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको मौलिकता के छ भने हामीले अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेर जनवादी क्रान्ति सम्पन्‍न गरेका छौँ, हाम्रै नेतृत्वमा संविधान घोषणा गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ र कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतका साथ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पर्याप्त बहुमतका साथ सरकार बनाएका छौँ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको आवश्यकता अनुरुप कैयन् कानुनहरु बनाइएका छन्। विदेश सम्बन्धमा हामीले-हाम्रो सरकारले जुन बाटो तय गरेको छ त्यो ऐतिहासिक महत्वको छ। आगामी दिनमा त्यसको महत्ता अझै स्पष्ट हुँदै जानेछ। सङ्क्षेपमा, हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेका छौँ, राजनीतिक स्थीरता कायम गरेका छौँ र लामो समयपछि वैदेशिक मामिलामा मुलुक ठीक ठाउँमा उभिन शुरु गरेको छ।
हरेक क्रान्तिको वास्तविक अनुहार क्रान्तिपछि देखिन्छ। क्रान्तिका उपलब्धिबाट बढी उत्साहित क्रान्तिकारीहरुले भविष्यका चुनौतिलाई नजरअन्दाज गर्दा र झन् ठूला कार्यभार नदेख्दा क्रान्तिहरु ओरालो लाग्न थाल्छन्। अर्थात् क्रान्ति गर्नु महत्वपूर्ण छ तर क्रान्तिलाई जोगाउनु अझ महत्वपूर्ण छ। किनकि क्रान्तिकारी हुनु भन्दा क्रान्तिकारी भइरहनु धेरै गाह्रो हुन्छ। क्रान्तिबाट आएको हाम्रो पिँढीले अझ बढी त्याग गर्न आफु तयार भएको र त्यसका लागि तयार रहन आम जनतालाई आह्वान गर्नु पर्थ्यो। किनकि त्यसले हामीलाई क्रान्तिमाथि खेलबाड हुनसक्ने खतराबाट जोगाउँछ।
क्रान्तिले इतिहासका सबै गल्तीको हिसाब-किताब चुक्ता गरिहाल्दैन बरु खातामात्रै खोल्छ। यस कुरामा भने हाम्रा विगत दुइवर्ष सन्तोषजनक रहेनन्। यी दुई वर्षलाई हेर्दा निर्वाचन जित्नु र बहुमतको सरकार बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, सबै समस्याको समाधान हो भन्ने कोणबाट हामीले जनतालाई प्रशिक्षित गर्दैछौँ भन्ने देखिन्छ। कमरेडहरु ! खासगरी नेतृत्वका कमरेडहरु ! उत्तेजनाहीन र आग्रहहीन भएर धर्ती टेकौँ !
गत दश वर्षदेखि नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्‍न भएको निष्कर्षले हाम्रो आन्दोलनलाई सैद्धान्तिकरुपमा डोर्‍याएको छ। सामन्तवाद अन्त्य भएको र समाज पुँजीवादी भएको तथ्यलाई हामीले देखेको हुँदा त्यो निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। तर त्यस सैद्धान्तिक निष्कर्षको महत्वलाई हामीले राजनीति र सङ्गठनका क्षेत्रमा स्थापित गर्न सकेनौँ।
पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मात्रै होइन आजको एकिकृत पार्टीले पनि त्यो काम जिम्मेवारी पूर्वक गर्न सकेन। सिद्धान्तको सत्यतालाई सैद्धान्तिक रुपले मात्रै पुष्टि गर्ने पद्दति माक्र्सवादी पद्दति होइन। मार्क्सवादले हरेक सैद्धान्तिक निष्कर्षको परिक्षण वास्तविक जीवनमा खोज्छ। हामीले अहिले ‘नेपाल अर्ध सामन्ती-अर्ध औपनिवेशिक रहेन, यो पुँजीवादी भैसक्यो, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, हाम्रो आगामी कार्यभार समृद्धि र समाजवाद हो’ जस्ता पदावलीहरुलाई दोहोर्‍याइरहेका छौँ, त्यसै वरिपरी चक्कर लगाइरहेका छौँ। त्यस बाहिर हेर्नै छोडेका छौँ। त्यसले गर्दा सिद्धान्त, राजनीति र सङ्गठनका क्षेत्रमा एकसाथ गतिरोध, अस्पष्टता र अराजकता देखिँदैछ।
नेपाली समाज पुँजीवादी हो तर यो उत्पादक/राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको समाज होइन। बरु यो अनुत्पादकरदलाल पुँजीको वर्चस्व भएको पुँजीवाद हो। राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवादको आधार तयार हुँदैन तर राष्ट्रिय पुँजीको विकासले मात्रै समाजवादको ग्यारण्टी गर्दैन। त्यसैले हाम्रा अगाडि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र अर्कोतर्फ समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यभार छ। यो कार्यभार नै आज बाँचेको हाम्रो पीढीको अभिभारा हो। यसलाई आवश्यकरुपले विस्तार गर्दा रणनीति, कार्यनीति, कार्यभार, न्यूनतम र अधिकतम कार्यक्रमजस्ता विषय स्वतः समाधान हुनेछन्।
यो पुँजीवादको खास चरित्र दलाल पुँजीवादी छ भन्‍नुको अर्थ के हो भने आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, त्यसले आफुजस्तै राजनीति, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारीतन्त्र, बौद्धिक तथा नागरिक समाज, संस्कृति र सामाजिक चेतनाका बहुविध रुपहरु बनाएको छ। हरेक उत्पादन पद्धतिले आफुलाई निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहन्छ। दलाल पुँजीवादले पनि आफु अनुकुलका पार्टी, नेता, मन्त्री, सांसद, बौद्धिक, पत्रकार, कर्मचारी, सामाजिक अभियानकर्ताहरु पनि जन्माइरहन्छ। आजको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि राष्ट्रिय पुँजी र समाजवादको राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको पुनरुत्पादन गर्नु पर्छ, र अझ बढी मात्रामा उत्पादन गरेर मात्रै क्रान्तिले जित्छ। नत्र दलाल पुँजीवादले कम्युनिष्ट पार्टी स्वयंलाई निलिदिनेछ। कमरेडहरु १ गम्भिरतापूर्वक विचार गरौँ, हामी कता जादैछौँ ?
आजको मार्क्सवादी सिद्धान्तको आँखाले हाम्रो इतिहास र आजको समाजलाई हेर्दा समाजवादको हाम्रो बाटो निशन्देह यस्तो हुनेछ स् पार्टीका हरेक सदस्य आजको क्रान्तिकारी विचार-सिद्धान्तले सचेत हुन्छन्, ती सदस्यहरु सङ्गठित हुन्छन् र त्यो सङ्गठनले आफ्नो सम्पूर्ण पङ्तिलाई समाजका सबै क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपले परिचालित गर्छ। पार्टीका सबै सदस्यहरुको परिचालनले समाजमा गति पैदा हुन्छ, घटनाहरु उत्पन्न गर्छ, ती घटनाहरुले आम नागरिकमा पार्टीको पक्ष-विपक्षमा बहस सिर्जना गर्छ। पार्टीको पक्षमा रहनेहरुलाई क्रमशः सङ्गठित गरिन्छ। अब हिजोको भन्दा सङ्गठन फैलिन्छ, बलियो हुन्छ।
अब फेरि हिजोभन्दा ठूलो दायरामा पार्टीको गतिविधि हुन्छ र फेरि नयाँ र ठूला घटनाहरु पैदा हुन्छन्। यो क्रममा हाम्रो पार्टीको विचार, सङ्गठन र परिचालनले दलाल पुँजीलाई साँघु-याउने, राष्ट्रिय पुँजीको विस्तार गर्ने र सामाजिक न्यायलाई जोड दिँदै समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने काम गर्छ। ज्ञातव्य के छ भने पार्टीले यो काम लोकतान्त्रिक बाटो र पद्दतिभित्रै गर्छ। यही र मूलभूतरुपमा यही बाटो नै नेपालका मार्क्सवादी वा समाजवादीहरुको बाटो हो। लेनिनले करिब सवा सय वर्ष पहिले पार्टी सदस्यको योग्यताबारे छलफल गर्नु भएको थियो।
आज हामीले क्रान्तिको उपरोक्त प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने पार्टीका हरेक सदस्यको आधारभूत योग्यता तोक्नु पर्र्ने भएको छ। पार्टीका विचारप्रति सचेत हुनुका साथै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीका ‘हरेक सदस्य नकमाएको सम्पत्तिमा बाँच्दैनन वा आफ्नै कमाइमा बाँच्छन्, राज्यले तोकेको कर तिर्छन् र नागरिकले तिरेको राजस्व राज्यले दुरुपयोग नगरोस् भन्‍ने कुरामा हरबखत सचेत रहन्छन्’ जस्ता प्रावधानहरु विधानमै उल्लेख गर्नु पर्छ। त्यसले पार्टीलाई र पार्टीमार्फत् राज्य र समाजलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा अगाडि बढाउने छ।
आज नेकपा जुन शक्तिका साथ उपस्थित छ यसलाई उपरोक्त प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने हो भने हरेक वर्ष पार्टीले असाधारण उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न सक्छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीदेखि टोल कमिटीसम्म आठलाख सदस्यलाई सङ्गठित गरेर, त्यसका वरिपरी जनसङ्गठनसमेत अन्य संरचनामा रहेका अरु १०र१५ लाख सङ्गठित व्यक्तिहरु संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र जनप्रतिधि संस्था, जनसङ्गठनहरु र अन्य सामाजिक संघ-संस्थामार्फत् परिचालित हुँदा जुन उर्जा पैदा हुन्छ त्यसले मात्रै सामाजिक रुपान्तरणको आजको कार्यभार पूरा गर्न सकिनेछ।
पार्टी स्थायी कमिटीको चालु बैठकमा तपाईंले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदनमा कैयन् महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिएका छन्। खास गरी ‘पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा’ अन्तरगत उल्लेख गरिएको कार्य योजना पार्टी कमिटी र सदस्यहरुको परिचालन र विभिन्न तहका अधिवेशनमा केन्द्रित छन्। ती सबै आफैमा उपयुक्त छन्। उहि काम दोहोर्‍याएर फरक परिणामको आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन भनिएझैँ, आजकै वैचारिक र साङ्गठानिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता बोकेर कार्यकर्ताको परिचालन र अधिवेशन गर्दा फरक परिणाम नआउने कुरा स्पष्ट छ।
बरु यथास्थितिकै विस्तार हुनेछ। त्यसैले मेरो के प्रस्ताव छ भने केन्द्रिय कमिटीको आगामी बैठकभन्दा अघि स्थायी कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्यका बीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिष्ट पार्टीको आजको कार्यभार’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त शिर्षकमा ५-७ दिनको कार्यशाला आयोजना गरियोस्। त्यस कार्यशालामा पार्टीका सैद्धान्तिक, राजनीतिक र साङ्गठानिक क्षेत्रका सबै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालियोस् र केन्द्रीय कमिटीमा ती निष्कर्षहरु पेश गरियोस्। केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यसैगरी विस्तारपूर्वक छलफल गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
पार्टी बैठकको मर्यादाक्रमको ढाँचामा सबै विषयमा त्यहि गम्भीरताका साथ छलफल नै नहुने हुँदा कार्यशाला नै उपयुक्त हुनेछ। यो कामले केही समय लिए पनि एक पटक पार्टीका विचार, सङ्गठन र कार्यक्रमबारेमा छलफल गर्न र आम सहमति कायम गर्न सकियो भने पार्टी वास्तविक अर्र्थमा पुनर्गठन हुनेछ र क्रान्तिका चौतर्फी कार्यभार बहन गर्न सक्षम हुनेछ।